Dhismaha Galmudug oo khilaaf cusub lugaha la galay | Somsoon
Home ARAGTIDA Dhismaha Galmudug oo khilaaf cusub lugaha la galay
Dhismaha Galmudug oo khilaaf cusub lugaha la galay
Waxaa soo ifbaxay khilaaf cusub iyo diiidmo ka dhan ah Guddiga dhismaha maamulka Galmudug kaasi oo ay dhawaan soo dhistay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Xukuumadda Soomaaliya.
War ay si kala gaar ah usoo saareen qaar ka mid ah musharixiinta iyo Madaxa Xukuumadda Galmudug ayaa muujiyay sida ay uga soo horjeedaan guddiga cusub oo ay ku tilmaamen in uu yahay mid kasoo horjeeda dastuurka iyo balanqaadkii Madaxda Dowadda dhexe.
Way soo saareen musharixiinta kala ah Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowaa iyo Kamaal Daahir Guutaale ayey ku sheegeen in ay cadahay in “madaxda Villa Soomaaliya ay taageerayaan mid ka mid ah musharixiinta Galmudug.”
Waxaa sidoo kale warkaan ku xusan in “ololaha doorashadda musharaxaasi ay ka socoto xafiisyadda Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha,” balse ma aysan sheegin magaca musharaxa.
Waxaa jirta hadalheyn ku saabsan in Xukuumadda Soomaaliya ay taageereyso Wasiirku xigeenka Wasaaradda Howlaha guud iyo dib u dhiska Axmed kaariye Qoor-Qoor.
Musharixiinta maanta warka soo saaray ayaa sidoo kale tilmaamay in xubnaha guddigu ay ka tirsanyihiin “shaqaalaha rayidka ah ee Dowladda gaar ahaan Xafiisyada Madaxweynaha, Ra’iisul Wasaaraha, Golaha Shacaba, Wasaaradaha Qorsheynta, Dastuurka iyo Maaliyadda taasi oo kasoo horjeeda sharciga shaqaalaha rayidka ah.”
Qaybaha dambe ee qoraalkooda ayey ku shgeen in dhismaha guddiga aan loo marin sifo sharci ah islamarkaana aan la aamini karin.
Dhanka kale war kasoo baxay Madaxa Xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayuu ku sheegay in hanaanka lagu dhisay guddiga farsamadda Galmudug uu baal marsanyahay Dastuurka ku meel gaarka ah ee Dalka.
Sheekh Shaakir ayaa sheegay in magacaabista guddiga aysan waafaqsaneyn heshiis ay gaareen Dowladda Faderalka ah iyo Ahlu Sunna Wal Jamaaca 03/07/2019.
Madaxa Xukuumadda Galmudug ayaa sheegay in aysan aqoonsaneyn guddiga farsamadda Galmudug waxuuna ugu baaqay in aysan Dowladda dhexe sabab u nqon khalalaase siyaasadeed iyo kala fogaansho.
Wasaaradda Arrimaha Gudda ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa Talaadadii lasoo dhaafay soo saartay guddi ka kooban 13 xubnood kaasi oo loo xilsaaray soo xulista Baarlamaanka iyo Odoyaasha Dhaqanka waxaana guddigaas taageeray Madaxweynaha Galmudug.
Diidmadda cusub ee hadda soo baxday ayaa muujineeysa sida loogu kala aragti duwanyahay dhismaha Maamulka Galmudug. Waxaana suurta-gal ah waqti dheer lagu bixiyo si loo helo isfaham siyaasadeed.
Khilaafka cusub ee Galmudug ayaa sidoo kale caqabad xanuun leh ku noqonaya Madaxda Dowladda dhexe oo aysan weli hir gelin siyaasadooda ku aadan Maamulka Jubbaland. Waxaana lagu eedeeyay in ay doonayaan in musharax ay taageersanyihiin uu ku soo baxo doorashadda Galmudug.
Hadaba waxaa la isweydiinayo ayaa ah sida ay ku suurta-geli doonto in Galmudug ay ka dhacdo dorasho xalal ah loona wada dhanyahay.
Article horeSheekh Shariif “Ma filayo in ay dalka ka dhaceyso doorasho”.
Article socoda War Saxaafadeed: Caleemo saarka Madaxweynaha Jubbaland